कोरोनाभाइरस कोविड -१ lock लकडाउन अपडेट: जब तपाईं उठ्नुहुन्छ र महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईं फस्नुभयो, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? : मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	24 मार्च 2020 मा	• 16 टिप्पणिहरु
जब २०२० सुरु भए मलाई लाग्यो कि यो गाह्रो वर्ष हो। पूर्ण कोरोनाभाइरस कोभिड १ lock लकडाउनको अन्तिम चरण देख्दा अब केही आशा हुन्छ यो छिट्टै समाप्त हुनेछ। नयाँ वर्षको अवसरमा मैले लेखें: “जहाँसम्म मेरो कुरा हो, २०२० र्यापिड्सको वर्ष र परिवर्तनको एक हाइपरसोनिक गति हुनेछ। परिवर्तनहरू जुन हामीले इतिहासमा कहिल्यै देखेका छैनौं। यस पृथ्वीका शासकहरूको लागि समय सकिएको छ। तिनीहरूमा झूटा एकलताको लागि मात्र २ years वर्ष बाँकी छ। ”
२०१ 2019 को अन्त्यमा मेरो पुस्तकमा मैले भविष्यवाणी गरें कि त्यहाँ महामारी अझ बाँकी छ र हामीले विस्तृत भाइरस प्रणालीको गवाही देखाइरहेका छौं। फेब्रुअरी २ 24 को सुरूमै मैले एउटा लेख लेखें जुन स ho्ग्रह गर्ने समय आएको थियो। त्यो हप्ता अघि नै नेदरल्याण्ड्समा आपतकालिन देखिन्थ्यो। छवि जुन मिडियाले स्केच गर्‍यो (सम्भवतः) IMBers ती होल्डिंग शौचालय कागजहरू, मेरो विचारमा, तपाइँले किन किन्नुपर्दछ त्यसबाट ध्यान हटाउनको लागि एक चतुर मिडिया प्रोग्रामिंग ट्रिक थियो: लामो जीवनको खाना, डिब्बाबंद खाना, पानी, र त्यस्तै अरू। भाग्यवश, पाठकहरू पर्याप्त समय मा भयानक हुनु अघि यहाँ थिए।
"केबल" सफा हुनेछ भन्ने आशा
धेरै अधिक सही भविष्यवाणीहरू भर्खरका हप्ताहरूमा पछ्याए र मैले कुन कदमहरू अनुसरण गर्ने देखें। यसैले मलाई प्राय: सोधिन्छ: "अब मैले के गर्नु पर्छ?", "मैले सबै उपायहरू कसरी व्यवहार गर्ने?"
सोशल मिडियामा हामी अब भिडियोहरू को रूपमा देख्छौं जेनेट ओस्सेबार्ड वरिपरि जानुहोस्। उनी डोनाल्ड ट्रम्पलाई मानवताको उद्धारकर्ताको रूपमा चित्रित गर्छिन्, र दर्शकहरूलाई उनीहरूलाई हुने प्रत्येक चीजको अधीनमा बस्न आग्रह गरिएको छ। उनको भिडियोहरू मानिसहरूलाई हामी विश्वस्त गराउन कोशिस गर्दछौं कि हामी खेलिरहेका छौं, तर हामी यहाँ कन्ट्रोल गरिएको विपक्षको स्पष्ट रूपमा देख्छौं। जेनेट ओस्सेबार्डले Q-Anon सुरक्षा नेटमा मानिसहरूलाई ड्राइभ गर्न खोज्छ। उनी भन्छिन् कि डोनाल्ड ट्रम्प व्यस्त छन् 'केबलर यो कोरोनाभाइरस एक भूमिका खेल्छ।
के व्यक्तिले महसुस गर्दैनन् कि धेरै वैकल्पिक मिडिया यस्तो डबल्स खेल्नको लागि सिर्जना गरिएको हो। तिनीहरूले तपाईंलाई एलियनहरू बचाउने वा क्याबलको पतनको लागि आशा गर्दछन् (ट्रम्पसँग मुक्तिदाताको रूपमा)। मैले ती व्यक्तिहरूलाई सपना देखाउन मद्दत गर्नु पर्छ: केबल पतन हुँदैन।
उनको भिडियोको दर्शकहरू निष्क्रिय मोडमा राखिन्छन्। म तिनीहरूलाई भन्छु:
तपाईलाई निष्क्रिय मोडमा धक्का दिइन्छ जो क्यामेरा पछाडि बस्छन् र तपाईलाई यस्तो अनुभूति गराउँछ कि उनीहरूले तपाईका लागि यो व्यवस्था गर्दै छन्। यो भ्रम हो कि क्यू-अनन ट्रम्प वरपरका मानिसहरुको गोप्य क्लब हो जो सम्पत्तीलाई १% बाट टाढा राख्न चाहन्छ। तिनीहरू तपाईंलाई बचाउन आउँदैनन्! दुर्भाग्यवश निराश त्यो गलत आशा हो।
ट्रम्प क्याबल हो। ट्रम्पले कडाईका साथ लकडाउन उपायहरू लागू गर्दछ। युरोपमा हजारौं डिफेन्डर २०२० सिपाहीहरू 'क्याबल' सफा गर्न तयार छन् भनेर उल्लेख गरिएको चित्र गलत आशा हो।
जेनेट ओस्सेबार्डले तपाईंलाई शान्त रहन बोलाउँदछ जब यी सिपाहीहरूले कुलीन सफा गर्न थाल्छन्। चित्र प्राप्त गर्नुहोस्?
जेनेट ओसेबारार्ड पनि एक वित्तीय पुनर्स्थापना हुनेछ कि मा अब धनी १% मा रहेको सम्पत्ति जनतामा फिर्ता हुनेछ भनेर भन्छन्। "महान उद्धारकर्ता ट्रम्पले पनि तपाइँको लागि व्यवस्था गर्नेछ।" होइन, ऊ गर्दैन। उसले के गर्छ (यूरोपियन नेताहरू जस्तै) तपाईंलाई आधारभूत आय प्रदान गर्दछ र सम्भावना छ कि ठूला बहुराष्ट्रिय, बैंक र पेन्सन कोषहरू राष्ट्रियकरण हुनेछ। तपाईंलाई थाहा छ त्यो के हो? साम्यवाद.
हामी कम्युनिष्ट प्रणालीतर्फ लागेका छौं। द्रुत रेलमा। मैले विस्तृत रूपमा वर्णन गरे यो लेख.
त्यसैले हामी वास्तवमै एक वित्तीय रिसेट देखिरहेका छौं, तर क्यू-अनन र जेनेट ओस्सेबार्ड बाहेक अन्य प्रजातिहरूले तपाईंलाई भनिरहेका छन्। मैले साइटमा वर्षौंदेखि भनेको थिएँ कि यस्तो रीसेट आयो (हेर्नुहोस्) यहाँ)। कोरोना भाइरस अब एक राम्रो alibi छ। कि भीड एक तरीकाले खेल्न सकिन्छ वा अन्य तरिकामा प्रशंसनीय छ, तर जेनेट ओस्सेबार्ड कहानी जानबूझकर नक्कली समाचार जालहरूले भरिएको छ (जस्तै यहाँ वर्णन गरियो)
कम्युनिष्ट प्रणाली जुन जेनेट ओस्सेबार्ड र अन्य धेरै यति गौरवशाली छन्, तपाईंलाई चुपचाप बस्न आह्वान गर्दै, वास्तवमा यसको नकारात्मक पक्ष छ। यो एक हुनेछ निरंकुश टेक्नोक्रेट कम्युनिष्ट शासन हुन।
यो आशा गरिन्छ कि त्यहाँ केहि धेरै राजनीतिज्ञ हुन सक्छन् जो मैदान छोड्नेछन्। यो सायद मुख्य कारण यो प्याडेनहरू प्रतिस्थापन गर्न उपयोगी छ जसले यस टोटुरेटरी प्रक्रियालाई नयाँ प्यादासँग 'भाँचिएका हातहरू' को साथ शुरू गरेको छ। वैकल्पिक मिडियामा विचार र कभरेजबाट धोका नदिनुहोस् जुन केही प्रख्यात सीईओले राजीनामा गरे। त्यो Q-Anon सुरक्षा नेट खेलको एक हिस्सा हो।
टेक्नोक्रेट कम्युनिस्ट प्रणालीको अर्थ सायद तपाईले आधारभूत निश्चितताहरू (आय, आवास, आदि) पाउनुहुनेछ, तर तपाइँ टेक्नोलोजीद्वारा अनुगमित हुनेछ।
तपाईले बनाउनुहुने हरेक आन्दोलन ठूला डाटा प्रणालीहरूले अनुगमन गर्नेछ। कोरोनाभाइरसको प्रकोपले सुनिश्चित गर्दछ कि थप टेक्नोक्रेटिक साधनहरू चाँडै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। तपाईंले एउटा सोच्नु पर्छ अमिट डिजिटल आईडी, जुन, उदाहरणका लागि, तपाईसँग भएका भाइरसहरू रेकर्ड गर्दछ; तपाईं निको भए पनि; तपाईंले कुन औषधी र खोप लिनुभएको छ र तपाईंको स्वास्थ्यलाई क्लाउडबाट वास्तविक समयमा निगरानी गर्न सकिन्छ। त्यसो भए तपाईं चीजहरूको 5G इन्टरनेटको अंश हुनुहुन्छ।
जब तपाईं उठ्नुहुन्छ
त्यसोभए यदि तपाईं उठ्नुभयो र वैकल्पिक मिडियाले तपाईंलाई झूटा मिसिएको आधा सत्यको साथ निष्क्रिय मोडमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ र कम्युनिज्मलाई झूटा आशाको साथ अँगाल्न मद्दत गरिरहनुभएको छ, के तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि त्यसले तपाईंलाई टेक्नोक्रेटिकतर्फ औंल्याएको छैन। खतरा कि lurks। तिनीहरू तपाईं भित्र बस्न चाहन्छन् र सेना र पुलिसलाई उनीहरूको काम गर्न दिनुहोस्। आखिर, तिनीहरू क्याबल सफा गर्न आउँदछन्। होईन, प्राय जसो मिडियाले हेग वा ब्रसेल्समा मोहरा परिवर्तन रिपोर्ट गर्दछ; अधिकमा तिनीहरूले तपाइँलाई वास्तविक त्रास दिन्छन्। यस शतरंज खेलले तपाईको अपेक्षाहरूलाई खातामा राख्दछ, ताकि तपाइँ कथालाई पछ्याउन जारी राख्नुहुन्छ।
त्यसोभए यदि तपाईं वास्तवमै उठ्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले Q-Anon र डोनाल्ड ट्रम्प कथाहरू जस्ता झूटा भ्रमहरू मार्फत पोख्नु पर्छ। यदि तपाई वास्तवमै उठ्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले के भइरहेको छ हेर्नुपर्दछ र बुझ्नु पर्दछ कि निरंकुश शासनको उदय हुँदैछ। त्यो निरंकुश शासन अब टाढा गइरहेको छ। फेरि कहिले पनि। तपाईले स्वतन्त्र हुन पाउनुभएको स्वतन्त्रताहरू मात्र फिर्ता आउँदछन् यदि तपाईंले 'मार्क' प्राप्त गर्नुभयो भने। के त्यो बाइबलीय भविष्यवाणीको सम्झना दिलाउँछ? हो, त्यो बाइबलीय भविष्यवाणीको सम्झना गराउँछ:
र त्यो छाप, पशुको नाम वा उसको नामको संख्या बाहेक कोहीले किन्न वा बेच्न सक्दैन "(प्रकाश १ 13: १ 16-१-17)
मेरो पुस्तकमा म वर्णन गर्छु कि हामी भविष्यसूचक अन्त समयमा छौं। यद्यपि धेरैले यस समय धर्मलाई बेवास्ता गर्न रुचाउँछन् र म आफैं धार्मिक नभए पनि, म स्वीकार गर्दछु कि विश्व नेताहरूले धार्मिक एजेन्डा पछ्याउँदछन्। यो ट्रम्पले यरूशलेमलाई इस्राएलको राजधानी भनेर घोषणा गरेको कुनै कारण छैन र यो सोलोमनको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न चाहेको कुनै कुराको लागि होईन। मेरो पुस्तकमा म वर्णन गर्दछु कसरी विश्व नेताहरूले 'मास्टर स्क्रिप्ट' अनुसरण गर्छन्। त्यो मास्टरको लिपि अब हाम्रो आँखाको मुनि धेरै स्पष्ट र छिटो उल्टो छ।
र तपाईंले महसुस गर्नुभयो कि तपाईं कैदमा हुनुहुन्छ
हामी चाँडै नै मास्सामा फेला पार्नेछौं कि हामी पूर्ण रूपमा लक छौं। मलाई लाग्छ यो लामो समय हुनेछ। जनता यति डराउनुपर्दछ कि उनीहरूले कठोर उपायहरू स्वीकार गर्नेछन्। धेरै व्यक्तिहरू विन्डोजको पछाडि वा बालकनीबाट ढुवानी हुँदै जान्छन्। लगियो किनभने तिनीहरू संक्रमित भएको हुन सक्छ वा किनभने "निर्देशनहरू सुन्दैनन्"। र किनकि सबैजना आ-आफ्नो घर मा छन्, कोही पनि मद्दत गर्दैन।
मिडियाले हामीलाई भन्न जारी राख्नेछ कि तपाईं सफा क्लिनिकल र आवश्यक शल्यक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ र कसैलाई कहिले थाहा हुनेछैन कि कति व्यक्तिहरू ग्लागहरूमा हराउने छन्। धन्यवाद जेनेट ओस्सेबार्ड तपाई शान्तपूर्वक पर्खनुहोस्; विश्वस्त हुँदै "कि ट्रम्पले क्याबल सफा गर्दैछ"।
हामी सायद अझै पनि व्यक्तिहरूलाई राउन्डअप्स गर्नेछौं जो थकान र भोकका कारण सडकमा बाहिर जान्छन् र त्यसैले 'निर्देशनहरू सुन्दैनन्'। डिफेन्डर २०२० सम्भवतः त्यसका लागि तयार छ (“क्याबल” सफा नगर्न)।
त्यसो भए, महिनौं वा सायद एक बर्ष पछि, राहतका लागि थोरै आशाको राजनीतिले रेखदेख गर्नेछ।
मिडिया र राजनीतिले अन्ततः रूपरेखा बनाउनेछ भन्ने आशा राख्नुपर्दछ कि पहिले भाइरसबाट निषेध गर्ने औषधि छ र त्यसपछि खोप प्रदान गरिन्छ। र यो अनुमान गर्न सकिन्छ कि यो डिजिटल प्रणालीको परिचयसँग मिल्नेछ (माथि वर्णन गरे अनुसार) जहाँ यो जहिले पनि सबैले प्रस्ट हुन्छ जहाँ उनी वा उनी हुन् र कुन औषधी उसले प्राप्त गर्यो, वास्तविक समय निगरानी सहित। स्वास्थ्यको (र CRISPR-CAS12 सहित) कार्यक्षमता पढ्नुहोस् र लेख्नुहोस्).
त्यसो भए तपाई फेरि यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। क्षेत्र बाट जोन र अब ती सबै खुला बोर्डरहरूको साथ छैन, तर क्षेत्र सीमा पोष्टहरू धेरै व्यापक डिजिटल र संख्याहरूमा हुनेछन्। हामी व्यक्तिहरूमा भिन्नता पाउँछौं जुन केहि जोनहरूमा प्रवेश गर्न अनुमति दिइन्छ र अन्यमा प्रवेश गर्न अनुमति छैन। हामी निरंकुश टेक्नोक्रेटिक "मुक्ति राज्य" तिर गइरहेका छौं।
तिमी के गर्न सक्छौ?
त्यसोभए हामी के गर्न सक्छौं? के हामीले दाँत र न nलाई रोक्न सक्छौं? मलाई विश्वास छ त्यहाँ आधारभूत मानव अधिकार छ जुन कहिले पनि उल्लंघन गर्नु हुँदैन, र त्यो स्वतन्त्रता हो। अब यो उल्ल been्घनकालदेखि नै भएको छ र तपाईं शारीरिक रूपमा एक पुलिस राज्य को प्रतिरोध गर्न सक्नुहुन्न। वास्तवमा, कुनै पनि प्रकारको प्रतिरोधलाई निर्ममतापूर्वक दबाइनेछ। यदि तपाईं सोशल मिडियामा वा तपाईंको बैठक कोठामा (जहाँ सिरी सुन्दै छन्) भन्छन् कि तपाईं यो सबै हास्यास्पद उपायहरू सोच्नुहुन्छ भने, तपाईं निरंकुश स्थितिमा हुन सक्नुहुन्छ।
जो कोही जो धम्की दिने तत्व हुन सक्छ र हुन सक्छ टाकिन्छ। यी सबै "कोरोनाभाइरसको कन्ट्यामेन्ट" को आडमा हुनेछन् किनभने किनभने निर्देशनहरू अनुसरण नगर्ने वा सम्भवतः अरूलाई निर्देशनहरू अनुसरण नगर्न सल्लाह गर्ने मानिसहरू समाजका लागि खतरा हो।
के मसँग तपाईसँग गर्न सक्नेमा व्यावहारिक सल्लाहहरू छैन? हो, तर त्यो चेतना परिवर्तन हो र मिडिया र वैकल्पिक मिडियामा अब तपाईंलाई रोक्ने निष्क्रिय मनोवृत्ति भन्दा पूर्ण भिन्न दृष्टिकोण हो। त्यो वास्तव मा सक्रिय तपाईं को हुनुहुन्छ को बारेमा छ। त्यो एक रचनात्मक बल क्षेत्र र तपाईंको मौलिकता सक्रिय गर्ने बारेमा हो। त्यो अस्थायी लाग्छ, तर यो छैन। मँ तपाईंलाई केवल यो व्याख्या गर्दछु, म वाचा गर्छु।
मास्टर स्क्रिप्टको माध्यमबाट र सही भविष्यवाणी गरेर यो स्पष्ट हुन्छ कि यो वास्तविक परिवर्तनतर्फ महत्वपूर्ण कदम हो। मैले अक्सर भनें कि यसका लागि १ लेख धेरै छोटो छ। यसैले मैले लामो र लामो स्पष्ट समय र स्पष्ट पुस्तकमा काम गरें। त्यसोभए तपाईंले त्यो पहिलो पढ्नु पर्छ। यो अब महत्त्वपूर्ण छ। र त्यसोभए तपाईं त्यस पुस्तकको थप जानकारीहरू यहाँ वेबसाइटमा पढ्न सक्नुहुन्छ।
हामी धेरै शक्तिशाली प्राणी हौं र यो निष्क्रिय मोडबाट बाहिर निस्कने समय हो। तपाईं महसुस भन्दा धेरै ठूला हुनुहुन्छ! पत्ता लगाउने समय।
यस लेखमा अनुगमन गर्नुहोस्: यहाँ पढ्नुहोस्
जन्म लिङ्क लिङ्कहरू: valcabal.nl
ट्याग: anon, cabal, कोरोनाभाइरस, Covid-19, डोनाल्ड, IMBers, जेनेट, लकडाउन, बैज-दाह्री, महामारी, Q, ट्रम्प, फैलावट
एली माना लेखे:
24 मार्च 2020 मा 12: 59
सित्तैमा तपाईले प्राप्त गर्नुभयो, सित्तैमा तपाईले दिनुहुनेछ…
तपाईं किन स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो समाधान छोड्नुहुन्न?
म तपाईको समाधान खोज्नको लागी तपाईको पुस्तक किन्नको लागि हेराफेरी भएको महसुस गर्छु।
मलाई लाग्दैन कि त्यो तपाइँले खुलासा गर्नुहुने अभिव्यक्तिको अनुरूप छ।
वा म यसको बारेमा गलत छु?
24 मार्च 2020 मा 13: 18
यदि तपाईं बाइबलको लागि किताब पसलमा जानुहुन्छ भने के तपाईं सित्तैमा पाउनुहुन्छ?
यदि तपाईं रोटीको एक रोटीको लागि बेकरीमा जानुहुन्छ के तपाईं सित्तैमा पाउनुहुन्छ?
यदि तपाइँ टिभी हेर्नुहुन्छ, के तपाइँसँग भुक्तान सदस्यता छैन?
र तपाईं भन्नुहोस् "तपाईले पाउनु भएको कुनै कुराको लागि तपाईले दिनुहुने छैन ..."
कुनै कुराको लागि मैले7बर्ष भन्दा यो नि: शुल्क गर्दैछु, तर म प्रिन्टरलाई मेरो पुस्तक नि: शुल्क प्रिन्ट गर्न भन्दिन।
पुस्तकले ती सबै years बर्षको सारांश दिन्छ र पुस्तकमा सबैकुरा नि: शुल्क हो नि: शुल्क पढ्न मिल्ने साइटमा यहाँ फेला पर्‍यो। त्यसोभए तपाईंले खोज र लेखबाट लेखमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यद्यपि यस पुस्तकले अत्यन्तै संक्षिप्त सारांश दिन्छ त्यसैले बनाइएको छ; धेरै पाठकहरूको अनुरोधमा।
तपाईंको समर्थन र सराहनाको सराहना गरियो। पक्कै पनि यो आवश्यक छैन। यो अनुमति छ।
24 मार्च 2020 मा 22: 20
मैले भर्खर तपाईको किताब किनेको छु! मलाई वर्षौंको लागि प्रेरणा दिनुहोस्। एक मात्र चीज जुन अझै सूचनाको बारेमा राम्रो र विश्वास भएको महसुस गर्छ तपाई नै हो!
मैले सुनेको मात्र अधिक व्यक्तिहरू होईन।
मेरो प्रश्न निम्न अनुसार पढ्छ।
तिनीहरू हामीलाई कतिन्जेल लक गर्न सक्छन्? मतलब बच्चाहरू इत्यादिसँग जो धेरै लामो समय लिन सक्दैन? त्यो बाहेक र तपाईंसँग भएको सबै सजगताहरू! के तपाईं डराउँदैनन् कि तिनीहरूले तपाईंलाई लिन्छन् वा तपाईंलाई बेपत्ता बनाउँदछन् जहाँ भए पनि (कहिलेकाँही अचम्म लाग्दछ) मतलब सबै कुरा निश्चित रूपमा इन्टरनेटमा पढ्न सकिन्छ। र यो कहाँसम्म यसलाई देख्न सकिन्छ कि कसले पुस्तक किनेको छ? कि तिनीहरूले पहिले नै तपाईं उठाउन कि मा काम गर्न जाँदैछन् कि। म पाठ्यक्रम ध्यानपूर्वक तपाइँको पुस्तक पढ्न हुनेछ। माया गर्नुहोस् र ख्याल राख्नुहोस्।
यस समयमा चिन्तित आमा, तर हामी जान्दछौं कि हामी सोच्दछौं भन्दा धेरै शक्तिशाली छ! तर कसरी प्रश्न अझै छ ..
24 मार्च 2020 मा 14: 06
मार्टिनको लागि तपाइँको प्रतिक्रिया स्वच्छ छैन। मलाई दिनुहोस्
यसलाई त्यहाँ राख्नुहोस्।
24 मार्च 2020 मा 14: 08
तिनीहरू सामान्यतया कहिले पनि नाम प्रकाशित हुँदैनन् (अब तपाइँ जान्नुहुन्छ कि कसरी काम गर्दछ .. ट्रोलहरू, नक्कली प्रोफाइलहरू, बट्स ... तर विशेष गरी IMB'ers) जसले प्रतिक्रिया दिन्छ जब यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि सोशल मिडिया पूर्ण रूपमा राज्य विचारहरूको आधारमा रहन्छ।
24 मार्च 2020 मा 13: 16
यो वास्तवमा सामान्य संदिग्धहरुको एजेन्डा हो, गैर-अनुपालनले सहमति जनाउँदैन!
समुदायको लागि उपचार
24 मार्च 2020 मा 19: 01
ग्रेटा थुनबर्ग अरू बच्चाहरूसँग बाहिर खेल्दा रमाईलो गर्दछन्
स्पष्ट रूपमा आधा मिटरaको दूरीमा राखिएको छैन
वा उनी वसन्तमा रातमा नेदरल्याण्ड्समा निदाए र वसन्तमा in-डिग्री सेल्सियसको चिसो पाए।
24 मार्च 2020 मा 19: 45
यति पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ....
24 मार्च 2020 मा 20: 17
हो यो दयनीय हुन थाल्छ (यदि उनीहरूले चाहेका थिएन भने)।
24 मार्च 2020 मा 20: 16
मैले सिकें कि तपाईं गहिरो खरायोको प्वालमा डुबाउनुहुन्छ र जब तपाईं सही स्रोतहरू फेला पार्नुहुन्छ (मलाई लाग्छ कि यो साइट नेदरल्याण्डमा उत्तम स्रोत हो) चाफ (नियन्त्रण विकल्प वैकल्पिक साइटहरू) लाई वैध वैकल्पिक जानकारी दिन सजिलो हुन्छ। )।
तपाईंको अन्तर्ज्ञान सबै समय राम्रो हुँदै गइरहेको छ। (मैले केहि बर्ष पहिले सोचेँ कि बुउडेट र जस्तै निजेल फ्यारेज वास्तवमै फरक थिए)। जे भए पनि, म अब पूर्ण १००% को लागी विश्वास गर्दछु
% 99% वा अधिक वैकल्पिक साइटहरू विपक्षमा नियन्त्रित छन्
विश्वव्यापी रूपमा सबै राजनीतिज्ञहरूको १००% सम्भ्रान्त (कामका लागि) द्वारा पूर्ण नियन्त्रण गरिन्छ। (त्यहाँ एक छैन जो जाँचिएको छैन)।
25 मार्च 2020 मा 05: 25
पतंग !!! अन्तमा आधारभूत आय (नोही, श्री Vrijland को लेख नोभेम्बर २०१ read पढ्नुहोस्)
धेरै मानिसहरू धेरै खुशी छन् कि राज्य तिनीहरूमा पैसा आउँनेछ!
पैसा जुन हामी उही सिट स्टेट द्वारा निर्भर छौं।
हामीलाई चाहिएको पैसा, जसमध्ये उनीहरूसँग (सामान्य शंकास्पद व्यक्तिहरू) धेरै छन् र हामीसँग थोरै छ, यो अहिले शून्य र केवल हाम्रो पहुँच छैन।
तर हामी फेरि पैसाको साथ खुशी बनेका छौं, मार्टिनले यसलाई पहिले नै लेखमा समर्पण गरिसकेका छ, धेरै पहिले, कुकुरले कहिलेकाहीं ढिठो हुन्छ र बाँकीको लागि राम्रो हुन्छ, ल्याउनुहोस्, सिट, ले, पाक, राम्रो
प्याकेज सफा छ, राम्रो छ
25 मार्च 2020 मा 10: 23
त्यसोभए अमेरिकामा उनीहरू आधारभूत आयको लागी एक किसिमको परिचय दिन चाहन्छन् (believe००० usd प्रति परिवार मैले विश्वास गरेको)। यो सम्भवतः अमेरिका मा एक तथाकथित अस्थायी आधारभूत आय (स्थायी लागि अस्थायी न्यूजप्याक) को परिणाम हुनेछ।
यस्तो देखिन्छ कि यो आधारभूत आय केवल भर्चुअल मुद्रामा भुक्तानी हुनेछ (एक प्रकारको FED बिटकॉइन) कम्तिमा मैले यो सुनेको छु। त्यसोभए सम्पूर्ण जनसंख्यालाई नयाँ एक विश्व इलेक्ट्रोनिक मुद्राको लागि प्रयोग गर्न दिनुहोस्।
यो अवश्य विश्वव्यापी रूपमा रोल आउट हुनेछ।
यस्तो देखिन्छ कि अमेरिका र एशियामा मानिसहरू (तर मैले यो सुनेको छु) अब G जी सुपर छिटो बाहिर निकाल्दैछ (पुशब्याक बिना किनभने जनसंख्याले अन्य कामहरू गरिरहेको छ)। मलाई लाग्छ कि यो विश्वको बाँकी ठाउँमा पनि हुनेछ।
अफ्रिकामा, जहाँ धेरै देशहरू अझै 3G जीमा छन्, मलाई यो कसरी गर्ने भनेर थाहा छैन।
त्यहाँ G जी टेक्नोलोजीको बारेमा कुराकानी पनि छ, मलाई थाहा छैन कि त्यसले कस्तो किसिमको त्रास ल्याउनेछ। नयाँ टेक्नोलोजी यति द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ कि चीजहरू समातिएका छन् जबकि अघिल्लो एउटा पनि प्रस्तुत गरिएको छैन।
25 मार्च 2020 मा 10: 52
एलोन मस्कसँग ब्युटीफुल रकेटको एक जोडी छ जुन विश्वव्यापी कभरेजको लागि आकाशमा दर्जनौं s जी उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने भनिएको छ।
मलाई आश्चर्य छ कि यो कसरी टेक्निकल हो, किनकि G जी फ्रिक्वेन्सीलाई थोरै दूरी चाहिन्छ, तर यो तपाईं मिडियामा फेला पार्नुहुन्छ।
26 मार्च 2020 मा 06: 54
मार्च १,, २०२० सम्म, COVID-१ longer लाई अब युकेमा उच्च परिणाम संक्रामक रोगहरू (HCID) को रूपमा लिइदैन।
.. मादुरोडम बाहेक 🙂
26 मार्च 2020 मा 07: 10
त्यो किनभने ट्रम्प, बोलसनो र जोनसन सबै एक समान ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्दछन्: दायाँ तर्फको ब्रान्ड
र मैले धेरै लेखहरूमा धेरै चोटि लेखेको छु, रबर्ट जेन्सेन, एलेक्स जोन्स जस्ता व्यक्तिहरू र दायाँ-वि wing्गको मुखपत्रहरू जस्ता सुरक्षा सुरक्षित हुनुपर्छ। तिनीहरूले धेरै अनुयायीहरू प्राप्त गर्नु पर्छ जो मुख्यधारा मिडिया र मुख्यधारको राजनीतिको आलोचना गर्दछन्। तिनीहरूले त्यो ब्रान्ड निर्माण गर्न मद्दत गर्नुपर्दछ र त्यस ब्रान्डसँग स्पष्ट दर्शन लि philosophy्क गर्नुपर्दछ। तिनीहरूले उक्त ब्रान्डलाई ट्रम्प क्याम्प (ट्रम्प, बोलसनोरो, जोनसन) लाई स्पष्टसँग लिंक गर्नुपर्नेछ।
त्यसो भए त्यो (स्पष्ट रूपमा प्रोफाइल गरिएको) ब्रान्ड सामूहिक रूपमा उडाइनेछ। सडक जुन अहिले छनौट गरिएको छ सडक नै हो "उनीहरूले यस्तो नाटक गर्छन् कि यो कोरोनाभाइरस महामारीको साथ खराब छैन"। दायाँपट्टिको ब्राण्ड यसैले 'कोरोनाभाइरस स den्कट अस्वीकार' सँग जोडिएको छ।
त्यसोभए कुरा पूर्ण रूपमा बन्द छ। त्यसोभए ट्रम्प र बोलसनो र जोनसन (ब्रेक्सिटको अन्त्य) ले मैदान छोड्नुपर्नेछ र वामपन्थी पुरानो राजनीतिक क्याबालले फेरि कब्जा गर्‍यो र आलोचकहरू जेलमा जानेछन्; कसैले पनि फेरि मुख्यधारको मिडियामा श should्का गर्नु हुँदैन।
नतिजा: विचारवादी पुलिस सहित एक अधिनायकवादी टेक्नोक्रेट कम्युनिस्ट "मुक्ति राज्य"।
29 मार्च 2020 मा 13: 34
तपाईको अन्तरदृष्टि को लागी मार्टिन धन्यबाद। मैले तपाईंको पुस्तक पिडिएफको रूपमा खरीद गरें किनकी कुल लकडाउन आउनेछ कि मलाई थाहा थिएन, तर यो अहिलेसम्म छैन, हामी "स्मार्ट" डच मानिसहरु "बुद्धिमान लकबडा" ह्यान्डल गर्न सक्दछौं। मैले भन्नै पर्छ कि मैले एक पटक छोडिदियो किनकि मलाई यो अन्यायपूर्ण छ कि तपाईंले सबै प्रकारका मानिसहरूलाई नियन्त्रणको विरोधको रूपमा लेबल गर्नुभयो तर अब मैले देखेको छु कि तपाईं त्यस बेला सोचेको भन्दा बढी सही हुनुहुन्छ। चार्ली एच पछि मैले हरेक रब्बीथोलमा प्रवेश गरिसकेको छु - एक शब्दले मैले प्रयोग गरिन किनकि मलाई लाग्छ कि यो पेडोफाइल सोडोमीको रूपक हो - र वास्तवमा धेरै मृत छोराहरू उद्देश्यका आधारमा स्थापित भएको छ। म छक्क परेको छु कसरी निरालो भेडा जस्तो सम्पूर्ण विश्व जनसंख्या लकडाउन र सामाजिक दूरीमा डराएर निर्देशित छ। भाषा स्पेलकास्टिंगको एक रूप हो, यी दुई सर्तहरू तपाईं पहिलो हेराईमा सोच्न सक्ने भन्दा बढी स्कोप छन्। शारीरिक दूरीको साथ नारा तर केहि सामाजिकको नजिकले पूर्ण भिन्न प्रभाव पार्छ। र लकडाउन, पक्कै पनि, हाम्रो आत्मा वा टिटोपोटेन्ट स्टेम सेलको लकडाउनलाई संदर्भ गर्दछ जसरी तपाईंले कल गर्नुहुन्छ।
Ultsब्ल्सटाइन्स १०११ को बिल वेसिक, अब वाईटीमा होइन तर प्लेलिस्टहरूमा, र अब theocs101ark.com सटरनल लुसिफेरियन कोडिंग भाषाको अर्थ खुलाउनमा माहिर छ जुन वास्तविक भाइरसले संक्रमित संक्रमित छ। तपाईंले देख्नुहुने छैन जब सम्म तपाईंले यो महसुस गर्नुहुन्न। दुर्भाग्यवश, हामी मध्ये% 101% भेडाहरूले यसलाई देख्दैनन्।
मँ पेट पेट दुखाई छ जब म मानवता को लागी के को बारे मा सोच्छु, तर मेरो आफ्नै मूल स्रोत कोड को साथ कनेक्ट रहन कोसिस गर्दछ। मसँग अझ धेरै गर्न छैन ...
« कृपया नोट गर्नुहोस्: कोविड १ Jan जेनेट ओसेटबारार्ड (Ninefornews) वृत्तचित्र एक नक्कली समाचार जाल हो
ट्रम्प, क्यू-अनन र 'गहिराइमा सफा गर्दैछ' मिथक (रोबर्ट जेन्सेन, जेनेट ओस्सेबार्ड) »
कुल भ्रमण: 1.519.835
तपाईका वरपर यति धेरै व्यक्तिहरू अन्धा किन छन्?
भाइरसले सम्पूर्ण शरीरलाई संक्रमित गर्न र स्टेम सेल जानकारी चोर्न कोसिस गर्दछ
लिडिया रुस्जे op प्रेस सम्मेलन मार्क रुट्ट र ह्युगो डे जोन्ज: डेढ मिटर समाज र अनुप्रयोगहरूको परिचय
विश्लेषण गर्नुहोस् op तपाईका वरपर यति धेरै व्यक्तिहरू अन्धा किन छन्?
SalmonInClick op तपाईका वरपर यति धेरै व्यक्तिहरू अन्धा किन छन्?
मार्टिन भिजल्याण्ड op तपाईका वरपर यति धेरै व्यक्तिहरू अन्धा किन छन्?